တံတားများ RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
မာရ်ရားမြို့မှတစ်နေ့လျှင်ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၊ အာဇာနည်တံတားမှတစ်ရက်လျှင်ခရီးသည်ပေါင်း 365 ။ ဝန်ကြီး Turhan၊ Fatih Sultan Mehmet Vakıfတက္ကသိုလ်ဥပဒေဌာနHaliçကျောင်းပရဝုဏ်ညီလာခံခန်းမကို“ City and [ပို ... ]
အဝေးပြေးလမ်းနှင့်တံတားစျေးနှုန်းများပြောင်းလဲခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနမှအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်တံတားများကိုဖြတ်ကျော်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်“ တက်ကြွသောစျေးနှုန်း” ပုံစံကိုနိုင်ငံသားများသည်ရက်ပေါင်းများစွာနှင့်နာရီပိုင်းအတွင်းလမ်းပေါ်တွင်သက်သာသောနှုန်းထားများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဝယ်လိုအား၏ပြင်းထန်မှု [ပို ... ]
Akaryakıt fiyatlarının sürekli artması araç kullanıcılarını alternatif yakıtlara yönlendiriyor. Çevre dostu ve tasarruf sağlayan LPG’li araçlar 2019 yılı TÜİK verilerine göre otomobillerin yüzde 37’sini oluşturuyor. Her yıl daha fazla sürücünün [ပို ... ]
‘Kentleşme ve Mutlu Şehirler’in ele alındığı Kartepe Zirvesi-2019 tüm hızıyla sürüyor. Kartepe ilçesinde düzenlenen Zirve’de ‘Şehir ve Ulaşım’ konusu irdelendi. Oturumda konuşan Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu Kocaeli’nin [ပို ... ]
Türkiye ekonomisinin atar damarı haline gelen köprü ve otoyollardan Ocak-Eylül döneminde elde edilen gelir 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’daki 15 [ပို ... ]
Eskişehir’in güzelliğine güzellik katan Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde, Büyükşehir Belediyesi’nin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Eskişehir’in sembollerinden olan köprülerin geçtiğimiz yıl başlayan bakımları bu yıl da devam ediyor. Park [ပို ... ]
Balıkesir Metropolitan မြူနီစီပယ်,3မီတာအကျယ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့တံတားGömeçကိုအသုံးပြုရန်။ ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသောတံတားသည် 11 မီတာရှည်လျားသောနှစ်လမ်းသွားအဖြစ် 30 မီတာအကျယ်ကျယ်သည်။ [ပို ... ]
Belt Road စီမံကိန်းအောက်တွင်နိုင်ငံများစွာ၌တရုတ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အထင်ရှားဆုံးသောစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူပြီးဖြစ်သည်။ 2013 မှစ၍ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည် Belt Road စီမံကိန်းများစွာကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (KGM)၊ ယနေ့ (အောက်တိုဘာ 7) သည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်တံတားခွန်ကောက်ခံမှုနှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးပျမ်းမျှအားဖြင့် 20 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသည်။ ကားလမ်းနှင့်တံတားခများသည်အောက်တိုဘာလမှ7အထိတရားဝင်ဖြစ်သည် [ပို ... ]
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan Melet Köprüsüne alternatif inşa edilen köprüde incelemelerde bulundu. Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan [ပို ... ]